xayeysiin: habar galbi
Casharkan Ingiriisiga ah, waxaan ku arki doonnaa muxaadarooyinka tirooyinka oo ku qoran Ingiriis. Marka hore, waxaan qori doonnaa jumlado muunad ah oo ku saabsan lambarrada Ingiriiska illaa 10, taas oo ah, tirooyin ku qoran Ingiriis, ka dibna lambarrada Ingiriisiga illaa 100, ka dibna lambarrada Ingiriisiga. Waxaan baran doonaa sida loo higaadiyo iyo sida loogu dhawaaqo tirooyinka Ingiriisiga.
Mawduucan ku saabsan lambarrada Ingiriisiga, waxaan ku soo qaadan doonnaa mowduucyada soo socda:
Lambarada ilaa 100 Ingiriis
Higaadda iyo ku dhawaaqida tirooyinka oo ku qoran Ingiriis
Siyaabaha loo xafido lambarada af Ingiriisiga
Sida loogu dhawaaqo lambar tobanle af Ingiriis
Sida loogu dhawaaqo lambarrada jajabka ah Ingiriisiga
Sida loogu dhawaaqo boqolleyda Ingiriisiga
Sida loo akhriyo taariikhaha iyo sanadaha ingiriisiga
Sida Loogu Qoro Lambarada Ingiriiska
Lambarada Ingiriisiga; Sida lambarada Turkiga oo kale, ayaa loogu abuuray si nidaamsan oo nidaamsan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad fahanto macquulnimada shaqada, waxaad baran doontaa higgaadinta iyo ku dhawaaqidda tirooyinka sida ugu dhakhsaha badan. Macnaha halkan, ugu horreyntii, waa inaad barataa labada higgaadin iyo ku dhawaaqidda dhammaan tirooyinka min 1 illaa 100. Si kastaba ha noqotee, waa inaad mudnaanta siisaa inaad ku habboon tahay dhammaan lambarrada 1 illaa 10. Waxaan dhihi karnaa barashada lambarada kale 10 ilaa 100 ayaa aad ufudud noqon doonta.
Marka hore, aan ku siino muuqaal, ka dibna aan u qorno lambarrada Ingiriisiga illaa boqol mid mid.
Hoos waxaa ku qoran tirooyinka Ingiriisiga min illaa boqol.
0 - eber (ziro)
1 - hal (gawaari)
2 - laba (tu)
3 - saddex (tıri)
4 - afar (loogu talagalay)
5 - shan (qalad)
6 - lix (cycs)
7 - jacayl (jacayl)
8 - sideed (sideed)
9 - ayeeyo (nayn)
10 - toban (maqaar)
11 - kow iyo toban (elevin)
12 - laba iyo toban
13 - saddex iyo toban (xaflad)
14 - afar iyo toban (afartan)
15 - shan iyo toban (konton)
16 - lix iyo toban (sikstiin)
17 - toddoba iyo toban (farax)
18 - siddeed iyo toban (siddeed iyo toban)
19 - sagaal iyo toban (nayntiin)
20 - labaatan (tuber)
22 - laba iyo labaatan (tuventi tu)
23 - saddex iyo labaatan (tuventiy tırii)
24 - afar iyo labaatan (loogu talagalay tuventiy)
25 - shan iyo labaatan (tuventiy fayf)
26 - lix iyo labaatan (kabatooyin tuventiy)
27 - labaatan iyo toddoba (jacaylka tuventy)
28 - siddeed iyo labaatan (tuventiy eyt)
29 - sagaal iyo labaatan (tuventiy nayn)
30 - soddon (törtiy)
31 - kow iyo soddon (törtiy van)
32 - laba iyo soddon (törtiy tu)
33 - saddex iyo soddon (törtiy tıri)
34 - afar iyo soddon (loogu talagalay törtiy)
35 - shan iyo soddon (törtiy fayf)
36 - lix iyo soddon (törtiy siks)
37 - soddon jacayl (jacayl törtiy)
38 - Soddon iyo Sideed
39 - Soddon iyo Sagaal (Törtiy Nayn)
40 - afartan (afartan)
41 - kow iyo afartan (afartan)
42 - afartan iyo laba (afartan tu)
43 - afartan iyo saddex (nooc afartan)
44 - afartan iyo afar (afartan loogu talagalay)
45 - afartan iyo shan (afartan fayf)
46 - Lix iyo afartan (afartan afaan)
47 - Afartan iyo toddobo (jacayl afartan)
48 - Sideetan iyo siddeed (afartan iyo afartan)
49 - Afartan iyo sagaal (afartan nayn)
50 - konton (konton)
51 - konton iyo kow (konton van)
52 - konton iyo laba (konti tu)
53 - konton iyo saddex
54 - konton iyo afar (konton loogu talagalay)
55 - konton iyo shan (konton fayf)
56 - konton iyo lix (konton siks)
57 - konton-jacayl (jacayl konton)
58 - konton iyo siddeed
59 - konton iyo sagaal (konti nayn)
60 - lixdan (siksti)
61 - lixdan iyo kow (fuck van)
62 - lixdan iyo laba (siksti tu)
63 - lixdan iyo saddex
64 - lixdan iyo afar (siksti)
65 - lixdan iyo shan (siksti fayf)
66 - lixdan iyo lix (siksti siks)
67 - lixdan jacayl (fuck love)
68 - lixdan iyo sideed
69 - lixdan iyo sagaal (siksti nayn)
70 - todobaatan (farxo)
71 - kow iyo toddobaatan (vanti toddoba)
72 - labaatan iyo labaatan (toddoti tu)
73 - saddex iyo toddobaatan
74 - afaratan iyo afar (toddobaatan iyo afar)
75 - shan iyo toddobaatan (sevinti fayf)
76 - lixdan iyo lixdan
77 - todobaatan-jecel (jacaylku haku farxo)
78 - sideetan iyo siddeed (toddobaatan iyo toban)
79 - toddobaatan iyo sagaal (toddobati nayn)
80 - siddeetan (eyti)
81 - kow iyo siddeetan (eyti van)
82 - siddeetan iyo laba (eyti tu)
83 - siddeetan iyo saddex
84 - afar iyo siddeetan (eyti loogu talagalay)
85 - sideetan iyo shan (eyti fayf)
86 - siddeetan iyo lix (eyti siks)
87 - sideetan-jecel (love eyti)
88 - sideetan iyo siddeed (eyti eyt)
89 - siddeetan iyo sagaal (eyti nayn)
90 - Sagaashan (naynti)
91 - kow iyo sagaashan (Naynti Van)
92 - sagaashan iyo laba (naynti tu)
93 - sagaashan iyo saddex
94 - sagaashan iyo afar (naynti loogu talagalay)
95 - sagaashan iyo shan (naynti fayf)
96 - lix iyo sagaashan (libaaxyada naynti)
97 - sagaashan iyo toddobo (jacayl naynti)
98 - sagaashan iyo sideed
99 - sagaal iyo sagaashan (Naynti Nayn)
100 - boqol (van handird)
Markaad ogaato dhammaan lambarrada 0 illaa 10, waxaad sii wadi kartaa inaad barato lambarrada kale 11 illaa 100. Si kastaba ha noqotee, sidaan soo sheegnay, mudnaantaadu waa inay noqotaa lambarrada 1-10! Dhanka kale, eber (0) waxaa loo qoraa sida eber Ingiriisiga waxaana loo aqriyaa sida zirou.
English; Waxbarashada ku saabsan luqaddan waxay noqoneysaa mid qiimo leh sida ay uga muuqato dhammaan qaybaha nolosha. Qof kasta xirfadiisa, goobta tababarka iyo danaha gaarka ah English waa inuu horumariyo aqoontiisa! Waqtigan xaadirka ah, kuwa bilaaba waxbarashada Ingiriisiga ayaa ah kuwa ugu horreeya Ereyga Ingiriisiga waxay u baahan yihiin inay horumariyaan ereygooda. Sidoo kale, caadi Muujinta Ingiriisiga Qaababka barashada sidoo kale waa in la bartilmaameedsado. Intaas waxaa sii dheer, sida luuqadaha kale ee adduunka, waxaa jira maadooyin ay tahay in qof walba ku barto Ingiriisiga. Tirooyinka ayaa ka horreeya!
Baro Ingiriiska Ujeeddo kasta oo aad leedahay adiga oo wakiil ka ah, waa inaad si xaqiiqo ah u barataa Ingiriisida u dhiganta tirooyinka iyo tirooyinka. Haddii kale, ma awoodi doontid inaad u gudubto heerka xiga ee waxbarashada Ingiriiska. Lambarada; Waxay ka kooban tahay ereyo ay lama huraan tahay in loo adeegsado meel kasta oo nolol maalmeedka ka mid ah. Lambarada Ingiriisiga hingaadooda iyo ku dhawaaqistoodana waa in hubaal laga barto.
Lambarada Ingiriisiga waxay u baahan tahay in lagu barto iyadoo loo eegayo qorshe gaar ah. Sida luuqadaha kale, Ingiriisiga waxaa lagu dhisay mabaadi'da qaarkood. English; ma aha luqad in lagu barto si aan sharci ahayn ama qaab aan macquul ahayn. Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad fahamto mabaadi'da aasaasiga ah ee ku hadalka iyo qorista Ingiriisiga, way fududaan doontaa in la barto waxa ka hadhay. Lambarada barashada ee Ingiriisiga Waxay ku habboon tahay qeexitaankan si aad u wanaagsan.
Maxaad Feejignaan u Leedahay Marka Aad Baraneyso Lambarada Ingiriiska?
Lambarada Ingiriisiga; Sidii aan horay u sheegnay, waxay leedahay laxanka gudaheeda. Si kale haddii loo dhigo, waxaa loo nidaamiyaa si waafaqsan nidaam gaar ah. Taasi waa sababta aad si fudud ugu baran karto lambarrada af Ingiriisiga. Barashada tirooyinka Waxay u egtahay mid dhib badan. Xilligan, waa inaad ku bilowdaa barashada lambarrada 1 illaa 10. Barashada lambarradan ayaan kugu adkaan doonin. Sababtoo ah waa inaan sheegnaa inay yihiin nambarada aad ku taqaanno dugsiga, TV-ga iyo meelo kale oo badan.
Lambarada Ingiriisigu waxay leeyihiin tilmaamo gaar ah. Dhammaan lambarrada laga bilaabo 12 illaa 19 way fududaan doonaan in la barto iyadoo lagu darayo - toban illaa dhammaadka. Waqtigan xaadirka ah, waxaan dhihi karnaa in shaqadaadu fududaan doonto markaad baraneyso lambarrada ku jira baaxadda aan soo sheegnay. Nambarada aan ka aheyn 11 iyo 12 waxaa loo habeeyay si waafaqsan qaanuunka aan soo sheegnay. Waxay noqon laheyd sax in la barto lambarada 20, 30, iyo 40 oo lagu dhuftay 10.
Tirooyinka barashada ee u dhexeeya 20-30 ama 30-40 aad ayey u fududaan doonaan maxaa yeelay waxaad isticmaali doontaa lambarka 9aad ee aad horay u soo baratay. Barashada lambarrada 100 kadib waxaa lagu sameeyaa isla caqli ahaan. Marka hore, waa inaad sheegtaa inta weji ee lambarku ka kooban yahay. BoqolKadib go'aaminta ka dib sida, laba boqol, sideed boqol, tirada intiisa kale waa 1 illaa 100. Lambarada Ingiriisiga Waa inaad u dhigantaa qaybta.
Lambarada barashada ee Ingiriisiga Aad muhiim u ah! Markaad isticmaaleyso luqad isku-hadal ah maalin walba, markay tahay arrimaha hay'adaha ama kuwa rasmiga ah Lambarada Ingiriisiga ayaa lala kulmay. Intaas waxaa dheer, iskuulka, shaqada, guriga, markaad dalbaneyso cuntada, qorida codsi, qeexitaanka cinwaan iyo meelo kale oo badan. Lambarka Ingiriisiga Waxaad u baahan doontaa macluumaad.
Haddii aadan aqoon u dhigma tirooyinka Ingiriisiga ama aad u garanaysid si aan dhammaystirnayn, waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin badan. Xaqiiqdii, shaqooyinkaaga badan baa loo joojin doonaa sababahan awgood. Xaaladdan dhexdeeda, waa inaad ku barataa lambarada Ingiriisiga oo ay weheliyaan higgaadintooda iyo ku dhawaaqiddooda. Xitaa, Barashada luuqada ingiriisiga waa inaad marka hore ka bilowdaa lambar.
Layliyo leh lambarro af Ingiriisi ah
Waxaa fadhiya soddon iyo kow qof qolka fadhiga. (Qolka fadhiga waxaa ku jira 31 qof.)
Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarintiisii ​​lixaad ee Ballon D'Or sannadka 2019. (Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta lixaad ee Ballon D'Or ee sanadka 2019.)
Lix boqol oo qof ayaa guryo la’aan ku reebtay dhulgariirka ka dib. (600 oo qof ayaa guryo la’aan ku hadhay dhulgariirkii ka dib.)
Waxaan weydiistay labaatan jeer inaan aamuso. (Waxaan kaa codsaday inaad aamusto 20 jeer.)
Wuxuu mar saddexaad aaday Faransiiska sanadka 2020. (Wuxuu tagay Faransiiska markii seddexaad 2020.)
Sidee loo Aqriyaa Nambarka Tobanlaha ee Ingiriisiga?
Akhrinta jajab tobanle oo Ingiriis ah Waxay u dhacdaa si ka duwan marka loo eego tan Turkiga. Bar jajab tobanle In kasta oo loo akhriyayo dhibic ahaan, inta soo hartay waxaa loo akhrinayaa lambarro mid mid.
5: barta shanaad
30: dhibic seddexaad
75: dhibic toddobaad shan
06: dhibic eber lixaad
95: laba dhibic sagaal shan
Sidee loo Aqriyaa Lambarada Jajabka ah ee Ingiriisiga ah?
Akhrinta nambarada jajabka ah ee Ingiriisiga ah Waxa jira iskaga mid ahaansho u dhexeeya akhriska jajab tobanlaha iyo tirooyinka. Nambarada tirooyinka jajabka ah waxaa lagu aqrinayaa iyadoo la isticmaalayo lambarro tirinta, iyo hooseeyaha waxaa loo akhrinayaa iyadoo la adeegsanayo lambarrada caadiga ah Intaas waxaa sii dheer, markay tiradu ka badan tahay hal, tirada amarada ee hooseeyaha waxaa lagu aqrinaya jamac. Xeerka aan ka hadlayno wuxuu khuseeyaa dhammaan lambarrada marka laga reebo nambarka 2. Marka lambarka hooseeyayaashu ay yihiin 2, sharci ka duwan ayaa lagu dhaqmayaa. Xaaladaha noocaas ah, haddii lambarku yahay 1 nus, haddii nambarku ka badan yahay 1 kala badh akhri sida.
1/3: saddex meelood meel
3/5: saddex meelood shan
5/8: shan sideedaad
3 / 2: seddex qeyb
Sidee loo Aqriyaa Boqolleyda Ingiriisiga?
Akhrinta boqolleyda ee Ingiriisiga Aad ayey u fududahay. Intaas waxaa sii dheer, waa inaan dhahnaa boqolleyda aqrintu waa kuwo aad muhiim u ah. Waxaa si gaar ah loogu adeegsadaa nolol maalmeedka iyo nolosha ganacsiga.
6%: Lix boqolkiiba
30%: Boqolkiiba soddon
36,25%: Soddon iyo lix dhibic laba shan boqolkiiba
%boqol: Boqolkiiba boqol
500%: Shan boqol boqolkiiba
Hab ka duwan ayaa loo raacaa aqrinta xaddiga lacagta ku qoran Ingiriisiga. Markaad akhrinaysid qadarka lacagta, marka hore nambarka oo dhan waa la akhriyaa. Kadibna lacagta ayaa lagu darayaa dhamaadka. Marka laga hadlayo lambarrada jajab tobanle, waxaa lala kulmay in si gooni ah loo akhriyo qaybaha ka hor iyo ka dib dhibcaha. Sidoo kale, haddii uu jiro magaca qadaadiicda lacagta la akhrinayo, magacan waa in lagu daraa dhamaadka. Si kastaba ha noqotee, kor ku xusan aqrinta jajab tobanle waa ka duwan yahay. Taasi waa sababta aan u nidhaahno in xeerarkani ay khuseeyaan oo keliya lacagaha. Waxaan ku sharxi doonnaa tusaalooyin si wanaagsan looga fahmo mawduuca!
$ 30: Soddon doolar
55 Euro: Konton iyo shan euro
150 £: Boqol iyo konton rodol
12,66 Euro: Laba iyo toban euro lixdan iyo lix
$ 45,35: Afartan iyo shan doolar iyo soddon iyo shan senti
Natiijo ahaan, waa inaad si dhab ah uga shaqeysaa akhrinta qaddarka lacagta.
Sidee Loo Aqrisaa Qiyaasaha Afka Ingiriiska?
Halbeegyada cabbirka Ingiriisiga Waxaa loo soo gaabiyey sida af Turki. Ka sokow, waa inaan sheegnaa inaysan dhib ku ahayn akhriska cabbiraadaha. Waa suuragal in loo akhriyo sida loogu akhriyo af Turki.
50m: Konton mitir
30 km / saacaddii: Soddon kiilomitir saacaddii
12ft: Laba iyo toban dhudhun
2tsp: Laba qaado yar
Sidee Loo Aqristaa Sanadaha Ingiriisiga?
Sida Turkiga oo kale, akhriska sannadaha Ingiriisiga ayaa xoogaa ka dhib badan akhriska lambarrada caadiga ah. Sannado ka kooban lambar afar-lambar ah, ugu horreyn labada lambar ee ugu horreeya ayaa loo akhriyaa sidii tiro isku dhejisan. Markaa waa inaan sheegnaa in labada lambar ee soo socda loo akhriyo sidii tirooyin ahaan. Si kastaba ha noqotee, sanadaha qaarkood xaaladdan lama adeegsan karo.
Gaar ahaan 100-ka sano ee ugu horreeya millennium-ka cusub waa in loo akhriyaa tiro dhan, xitaa haddii ay yihiin afar lambar. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa wax caadi ah in loo akhriyo iyaga oo ah tiro laba-godle ah. Millennia, dhinaca kale, waa in lagu akhriyaa tiro ahaan wakhti kasta iyo meel kasta. Qarniyaal cusub ayaa loo akhriyaa sida tirooyin isku dhafan, sidaad qiyaasi karto. Intaa waxaa dheer, erayga kun lama isticmaalo. Gaar ahaan marka la akhrinayo kunkii sano ee la soo dhaafay, adeegsiga erayga kun kuma jiro su'aal.
Hab ka duwan ayaa lala kulmayaa akhriska saddexda lambar. Waa wax caadi ah in loo akhriyo lambarro saddex-god ah, iyo sidoo kale in loo akhriyo lambar hal-god oo ay ku xigaan laba lambar. Labada sano waxaa loo akhriyaa sida tirooyin lamid ah tusaalayaashii hore. Ka sokow, waxaad isticmaali kartaa muujinta "sanadka" intaad sanad kasta wax akhrinaysid si aad uga fogaato jahwareer kasta. Sidan oo kale, macnaha sanadka ayaa laga dhigi karaa mid gaar ah. Si kastaba ha noqotee, xoojinta aan soo sheegnay waxaa la sameeyaa oo keliya marka la akhrinayo laba ama saddex sano oo god ah.
Intaas waxaa sii dheer, sanadaha kahor sanadka "0" waa BC Waxaa lagu akhriyaa adoo kudaraya. BC waxaa loogu dhawaaqaa "bisi". Waxaan ku sharixi karnaa sida loo akhriyo sanadaha tusaalayaal!
2013: Labaatan iyo saddex ama laba kun iyo saddex iyo toban
2006: Laba kun iyo lix
2000: Laba kun
2020: Laba kun iyo labaatan
1500: Shan iyo toban boqol
1850: Siddeed iyo toban iyo konton
26: Lix iyo labaatan
3000 BC: Saddex kun oo dhalashadii Ciise ka hor
Ugu dambeyntiina, waa inaan ka hadalnaa sida loo akhriyo eber. Adeegsiga eber waxaa laga helaa Ingiriisiga Ingiriiska iyo Mareykanka labadaba. Nil waa hadal inta badan loo adeegsado natiijooyinka tartamada isboortiga. Waxba waa hadal aan looga adeegsan USA.
Markay tahay luqadda caalamiga ah, maskaxdaada marka hore English dakhliga. Xaaladdaani sinnaba ugama dhicin. Xaqiiqdii, waxaan maqalnay weedho ah in luuqadda guud ee adduunku yahay Ingiriis si isdabajoog ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaan si fudud u dhihi karnaa Ingiriisigu waa luqadda adduunka ugu badan. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa wuxuu la yaaban yahay sida Ingiriisiga loogu caan baxay.
Ingiriisigii oo fiday; Waxay ku saabsan tahay geeddi-socodkii soo maray Kacaankii Warshadaha ka dib. Thanks to caalamiyeynta ganacsiga, Ingiriisiga wuxuu bilaabay inuu boos helo. Luqad caalami ah; ma aha luqadda ugu hadalka badan adduunka. Shiine; malaha waa luuqad ay ku hadlaan dad badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa hubaal ah inay ku fashilantay inay noqoto luqad muhiim ah sida Ingiriiska.
Waxaan dhihi karnaa luqadu waxay noqotay mid caalami ah sababa dhaqaale iyo siyaasadeed awgood. Si aad ula socoto horumarka soo maray Kacaankii Warshadaha kadib Barashada Ingiriiska wuxuu noqday mid khasab ah. Intaa waxaa dheer, xaqiiqda ah in Ingiriisiga looga hadlay warbaahinta in ka badan 400 sano waa qodob kale oo muhiim ka dhigaya. Aasaasidda wakaaladda wararka caalamiga ah ee ugu horreysa London waa horumar xaqiijinaya macluumaadkan.
Sidee Ingiriisku u noqday Luqad Adduun?
English; In kasta oo ay tahay luuqad adduunka soo xukuntay muddo dheer maalmahan 2020s, haddana muu helin muuqaalkan markiiba. Horumarka taariikheed kadib, waxaan dhihi karnaa Ingiriisigu waa luuqad adduunka oo dhan xukumay. English; Maaddaama ay tahay luqadda rasmiga ah ee waddamada leh awood dhaqaale, farshaxan iyo awood cilmiyeed, way fududahay in adduunka oo dhan lagu faafiyo. Si kastaba ha noqotee, weli waxaan dhihi karnaa waxaa jira qodobo ka dhigaya Ingiriisiga inuu ka dhex muuqdo isgaarsiinta adduunka.
Kordhintii boqortooyadii Ingiriiska
Soo galitaankii Mareykanka oo ahaa dowladdii ugu weyneyd kadib luminta awoodda boqortooyadii Ingiriiska
Soo bixitaanka iyo faafitaanka nidaamka bangiyada
Ballaarinta xiriirka ka dhexeeya dowladaha iyo baahida loo qabo in luuqad guud la wadaago sababtan awgeed
Soo bixitaankii iyo faafitaankii telefishanka iyo raadiyaha, gaar ahaan shineemo
Horumarka la dareemi karo ee cilmi baarista sayniska iyo daraasadaha tacliinta
In kasta oo internetku aanu wali suuqa ka helin, haddana wuxuu kordhiyaa fursadaha ay dadku ku heli karaan macluumaadka.
Natiijo ahaan, waxaan dhihi karnaa horumarada kor ku xusan waa qodob muhiim u ah luuqada Ingiriisiga oo maanta noqota.
Waa maxay Muhiimadda Ingiriisiga ee Da'deenna?
Da'da dhijitaalka, aasaaskeeda waxaa la dhigay 1990-meeyadii; Sanadihii 2000 iyo wixii ka dambeeyay, 2010-kii, wuxuu bilaabay geedi socod dhab ah oo horumarineed wuxuuna noqday maanta. La la'aanta xuduudaha; waxay soo jiidanaysaa dareenka sida horumarka ugu muhiimsan ee da'da dhijitaalka ah. Si kale haddii loo dhigo, qofka ku nool dalka Turkiga; Waxay la xiriiri kartaa dadka ku nool dhinaca kale ee adduunka waqti kasta, inkasta oo ay ku kala duwan yihiin waqtiga iyo goobta. Waqtigan xaadirka ah, waxaan dhihi karnaa dadka ku kala duwan joqraafiyada kaladuwan waxay u baahan yihiin luuqad guud. English; Waxay ku guuleysatay inay noqoto luqadda guud ee dadka iyo hay'adaha muddo aad u dheer.
Si looga faa'iideysto tas-hiilaadka ay noo soo bandhigto adduunka dalku English tarjumaadaha ayaa loo baahanyahay in kabadan sidii hore. Labada websaydh iyo codsiyada moobiilka; Waxay u isticmaashaa Ingiriisiga sidii luuqad guud. Intaas waxaa sii dheer, ganacsiga elektaroonigga ah, oo beddelaya ganacsiga soo jireenka ah, wuxuu kaloo adeegsadaa Ingiriisiga. Si kale haddii loo dhigo, waxaa lama huraan ah inaad taqaanid Ingiriisiga si aad u aqriso, u fahanto ugana faa'iideysato wax kasta oo aad ku aragto adduunka is-dhexgalka!
Waa maxay sababta Ingiriisku u khuseeyo Markii laga jawaabayo su'aasha, waxaa lagama maarmaan ah in laga hadlo waxyaabo wax ku ool ah oo dadku fahmi karaan. Aqoonta Ingiriisiga ayaa lagama maarmaan u ah raacitaanka horumarka sayniska iyo farsamada. Tusaale ahaan, faahfaahin kasta oo laga wadaago coronavirus, daraasadaha talaalka iyo arimo kale oo badan; badanaa waxaa kujira ilaha shisheeye.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan dhihi karnaa dadka meel kasta oo ay adduunka ka joogaan waxay la hadli karaan adduunka oo dhan markay doonaan. Waad ku mahadsan tahay fiidiyowyada Ingiriisiga ah ee lagu soo rogay YouTube, tirada dadka la kulma gabi ahaanba xirfadaha iyo fursadaha waxbarasho gabi ahaanba ma ahan! Waxa kale oo jira dad la hadlaya kumanaan taageerayaal ah iyagoo si toos ah uga baahiya internetka! Fiidiyowyo iyo qoraallo; Waxay ku fideysaa xawaaraha iftiinka internetka, si loo yiraahdo. Si kastaba ha noqotee, qof kasta oo doonaya in laga maqlo adduunka English waa inuu sameeyaa!
Waxaan ku sharixi karnaa tusaale wanaagsan sida ogaanshaha Ingiriisigu u burburin karo xuduudaha. Greta Thunberg oo reer Sweden ah, oo hadda 18 jir ah; Bishii Ogosto 2018, wuxuu bilaabay mudaaharaadyo barta uu tallaabo uga qaadayo isbedelka cimilada. Isagoo soo jiitay dareenka shaqo joojinta dugsiga ee cimilada, Thunberg; Wuxuu ahaa u dhaqdhaqaaqaha cimilada ilaa waqtigaas. Waxa ugu muhiimsan ee Thunberg ka sooca kuwa kale ee u ololeeya waa shaki la’aan qaabkiisa wanaagsan. Si kale haddii loo dhigo, Thunberg wuxuu sharxayaa waxa uu doonayo inuu ku yiraahdo weedhaha ugu saxsan iyo codka codka; sidoo kale waxay samaynaysaa aragti xoog leh oo ay Ingiriisi weyn. Thunberg; English Hadduu dhallinyar yahay, malaha weligiis codkiisa ma maqli lahaa in kasta oo uu dacwaddiisa xaqa ah leeyahay!
Adeegsiga tarjumaadaha Ingiriisiga sidoo kale aad u ballaaran! Waa inaan dhahnaa tarjumaadaha Ingiriisiga waxaa loo isticmaalaa daawada, tikniyoolajiyadda iyo dhinacyo kale oo badan, gaar ahaan xiriirka caalamiga. Intaa waxaa dheer, gaar ahaan adduunka dhijitaalka ah Tarjumaadaha Ingiriisiga Waxaa loo adeegsadaa shaqooyinka aadka wax soo saarka u leh. Gaar ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in la sheego saameynta Ingiriisiga ee suuq geynta dijitaalka. Jiritaanka fursadaha dhijitaalka ah ayaa aad muhiim ugu ah noocyada waaweyn inay koraan oo ay noqdaan kuwa caalami ah! Taasi waa sababta shirkad kastaa u leedahay baahi sii kordheysa oo loogu talagalay tarjumaadda Ingiriisiga. Intaa waxaa dheer, Turjumaad Ingiriisi Waxa kale oo jira horumarin ku saabsan adeegyadeeda.
Sababtoo ah baahida sii kordheysa ee tarjumaadda, cusbooneysiinta ayaa sidoo kale lagu sameynayaa adeegyada tarjumaadda. Jiritaanka adeegyo tarjumaad hal abuur leh ayaa sidoo kale awood u siinaya tarjumaadaha Ingiriisiga in lagu wadaago adduunka oo dhan. Natiija ahaan, waxaan dhihi karnaa in tarjumaadaha Ingiriisigu ay ku dhex yaalliin adduunka isgaarsiinta dhijitaalka ah. Intaas waxaa sii dheer, waxqabadyada farshaxanka ayaa si dhow loola socdaa iyada oo ay ugu wacan tahay tarjumaadda Ingiriisiga. Si kale haddii loo dhigo, Turjumaad Ingiriisi; Waxay isku aragtaa meel dhinac kasta ah iyadoo la jaanqaadeysa fursadaha tikniyoolajiyadda soo koraya sida ugu dhakhsaha badan.
Sababahan oo dhan awgood, waxaan dhihi karnaa Ingiriisigu muhiimad weyn ayuu u leeyahay da'deena. Dugsiyada, jawiga shaqada iyo meelkasta oo aad ka fikiri karto Baro Ingiriiska Waxay ka joogsatay daruuri oo waxay noqotay qasab.